Hawaii - Fitantanana ny jono | Reef Resilience
Fanaraha-maso ny vondrom-piarahamonina Coral Reef tany Hawai'i's First Protective Protector Area
Tamin'ny fahavaratry ny 2009, ny fanjakan'i Hawai'i dia nanangana ny MPA voalohany an'ny Hawai'i izay mikendry tanteraka ny fampandrosoana, ny Kahekili Herbivore Manam-pahaizana momba ny Fisotroan-tsakafo (KHFMA), izay ahitana ny herbivores rehetra (parrotfish, mpitsabo, akorandriaka ary valizy) ary Ny fandrindrana ny trondro dia voarara, fa ny endrika fanjono hafa dia avela. Ny fametrahana ny KHFMA dia manome tranga fitsapana ny fandraràna ny fanjonoana ny herbivores amin'ny haran-dranon'i Hawai'i. Ny porofo manamarina ny fahombiazany dia mety hitarika bebe kokoa amin'ny fananganana io fomba fitantanana sy / na fitsipika fanampiny io. Ohatra, ao amin'ny 2014, ny fanjakan'i Hawai'i dia nampiditra fetranà kitapo roa parrotfisy isan-jaton'ny mpanjono isan'andro ary tsy haka ny endrik'ireo karazana parrotfish roa lehibe indrindra ho an'ny vatohara ao Maui, amin'ny ampahany noho ny porofo avy amin'ny ny tetikasa fanarahamaso KHFMA. Ao Hawai'i, toy ny any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao, ny fitsipiky ny fanjonoana sy ny faritra voaaro an-dranomasina dia mifamaly. Noho izany, ireo mpanohana roa sy ireo mpitsikera ireo fomba fitantanana ireo dia mandinika tsara ny vokatr'ilay fitantanana ny herbivore.
Faritry ny KHFMA eo amoron'ny Coast'i Kāʻanapali, Maui Andrefana. Sary © Hawai'i DLNR
Tany am-boalohany tamin'ny fametrahana ny KHFMA, ny Diviziona Hawai'i Resource Resources (DAR) sy ny mpiara-miasa ao amin'ny Oniversiten'i Hawai'i dia nametraka fandaharam-potoana fanaraha-maso mahazatra ao anatin'ny sisintany MPA omena mba hanangonam-baovao mba hanomezana loharano mialoha ho an'ny KHFMA. Ny fanadihadiana voalohany dia natao tamin'ny volana janoary 2008, 18 volana talohan'ny fametrahana ny tahiry. Ny fandaharam-potoana momba ny fanarahamaso dia ahitana fanadihadiana be indrindra natao tamin'ny DAR sy ny NOAA ao amin'ny Coral Reef Ecosystem Division.
Ny famolavolana fanadihadiana dia nahitana ny fizarazarana ny toeram-ponenana ao amin'ny sokajy fonenana 6 mifototra amin'ny firafitra ara-batana sy halaliny (vatom-paty marivo, vatohara lalina, voromahery sy hazo, voromahery lalina-manandanja, masivana, ary mifangaro afovoany lalina ), izay koa mifandraika amin'ny toerana eo amoron'ny moron-tsiraka ary manakaiky ny morontsiraka. Ao anatin'ny kilasy iainana isan-karazany, dia misy mpivarotra samy hafa nandinika 25m-lavitra nifindra monina, misy mpandeha iray manara-maso ny hazandrano iray ary ny iray hafa manao fandefasana fanadihadiana miaraka sary ary koa mirakitra an-dranomasina ny ranomasina rehefa milomano miverina. Matetika ny ekipa mpanao dive dia nahavita ny fanadihadiana 90-100 isaky ny boriborin'ny fanaraha-maso 4 andro, dia misy fizahana ny sary avy eo, ary ny fizarana trondro, urchin, ary benthika dia voatsindrona ao anatin'ireo kilasy fonenana sy amin'ny haben'ny KHFMA, miaraka amin'ny zara-taniny tsirairay avy. habe havana.
Ny volana septambra 2014, 5 taona aorian'ny fametrahana ny KHFMA, ny valim-pifidianana dia mampiseho ny porofo mahery vaika momba ny fanarenana ny herbivore. Efa mihoatra ny roa avo roa heny ny biomass parrotfish, indrindra ny fitomboan'ny isan'ny olona marobe, ary nitombo ny fahasamihafan'ny parrotfish, indrindra fa tany amin'ny toerana tsy tontan'ny ela izay azo inoana indrindra hohanina talohan'ny fanakatonana. Ny biomass surgeonfish koa dia nitombo tsikelikely, fa tamin'ny kely kokoa. Nandritra io fotoana io ihany, ny fanafenana ny ala marin-kisoa (CCA), izay heverina fa be loatra ny faneriteram-bozaka sy izay mety tsara ho an'ny fambolena sy ny fitomboan'ny koray, dia nihanitatra avy amin'ny famoahana 2 momba ny fanakatonana>> 10% rehefa vita ny 5 taona fiarovana. Manomboka mitombo ao anatin'ny KHFMA koa ny fonon'ny Coral efa ho ny volana farany amin'ny 18, saingy kely ny fihenany. Jereo ny fandaharam-pianarana mifandraika amin'ny Kahekili Herbivore Maneran-tany amin'ny Fitantanana ny Harena an-kibon'ny tany ho an'ny antsipiriany momba ny hetsika natao sy ny lesona azo avy amin'ny fitantanana ny faritra ho an'ny faharetan'ny vatohara.
Noho izany, ny porofo mialoha dia manaporofo fa ny fiarovana ny fiompiana dia miasa; Mihamitombo ny tsindry ahafahana mitombo ary vokatr'izany, ny fifandanjana fifaninanana dia nivadika avy amin'ny algal ka hatrany amin'ny faritry ny haran-dranomasina taorian'ny naharitra ela ny fihenan'ny vatohara teo an-toerana.
Ny fahaiza-mamokatra vokatra avo lenta mampiseho ny fihavaozana dia tena zava-dehibe tokoa amin'ny fitazonana ny fanohanana ampahibemaso sy malalaka kokoa amin'ny KHFMA. Ankoatra izany, ny fahafahana manavaka ny lamin'ny fanarenana any amin'ny faritra samihafa ao amin'ny tahiry dia tena nanampy tokoa ny fahatakarana ny toe-javatra toy ny fepetra azo ekena. Ohatra, nandritra ny roa taona niarovana, na dia nisy fanarenana mazava aza tany amin'ny toerana lava kokoa, dia nisy ny fiovana kely tany am-piandohana ny harambato mitam-basy teo akaiky teo amin'ny toeram-piantsonana, ary noho izany, tena mora voadona amin'ny fihazana. Azo antoka fa nisy poizina nitranga tany amin'ny taona voalohany taorian'ny fanakatonana. Na dia izany aza dia hita fa mihatsara ny fanarahan-dalàna, mifototra amin'ny angon-tserasera manondro ny fahombiazan'ny sehatra sy ny tatitra avy amin'ny vondrom-bahoakam-pahefana manerantany.
Ny fiaraha-miasa matanjaka mifototra amin'ny masoivohom-pitantanana eo an-toerana (DAR) miaraka amin'ny rohy matanjaka ao amin'ny fiarahamonina dia fototra iray amin'ny fiantohana fa ny vokatra fanaraha-maso tsara dia efa niely be.
Ireo trondro voankazo mahasoa dia voaaro tanteraka ao anatin'ny KHFMA. Sary © Hawai'i DLNR
Tahaka ny mahazatra any Hawai'i, ny vatohara ao amin'ny KHFMA dia miovaova be, izay ahitana karazana habetsahan'ny karazana habaka sy toetoetran'ny habakabaka. Noho izany, nanangana tetikady fanadihadiana izahay mba hampitombo ny isam-bidy sy ny fielezan'ny habakabaka ao amin'ny KHFMA mba hampitombo ny fatokisana fa ny vokatra dia solontenan'ny toeram-ponenana rehetra ao anaty tahiry. Misy ny fifanarahana amin'ny fanapahan-kevitra rehetra, saingy ny safidy manan-danja dia natao tamin'ny:
Tsy mahagaga raha mahita fifindrana fa tsy mampiasa transition maharitra. Ireo data avy amin'ny fifindrahindrana maharitra dia mety hanovaova ny fihenanam-pandrefesana, saingy misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fametrahana sy ny fitazonana izany, ary na dia ny mahita azy mandritra ny fianarana fanjonoana; ary
dia manamboatra sarin'ny habakabaky ny haran-dranomasina KHFMA, ary ny faritra rehetra eny amin'ny habakabaka dia tafiditra ao amin'ny kilasin'ny habaka voalaza etsy ambony
Ny sarintanin'ny toeram-ponenana dia manatsotra ny fandaharam-potoana miasa satria ahafahan'ny mpanarara mitondra fitambarana betsaka araka izay azo atao ao anatin'ireto plonono tsirairay izany, ary ampiasao ny toerana misy ny transect mba hanasokajiana ireo fiovan'ny toetr'andro tsirairay amin'ny iray amin'ireo sokajim-ponenana voaaro voafantina. Azontsika atao avy eo ny mamoaka angon-drakitra samihafa isaky ny fanadihadiana mifandimby manokana ho an'ny kilasy fiantsonan'ny tsirairay ary ho an'ny KHFMA amin'ny ankapobeny. Izany dia nahafahantsika namantatra ireo làlana isan-karazany amin'ny fanarenana any amin'ny faritra samihafa an-habakabaka noho ny karazam-biby samihafa, ny tantaran'ny fanjonoana, ary ny fanarahan-dalàna ao an-toerana.
Ny lesona manan-danja iray hafa dia ny fametrahana imbetsaka isam-bolana isan-taona noho ny fahasamihafana ara-potoana eo amin'ny macroalgal. Nataonay ny lohataona sy ny fahavaratra fahavaratra isan-taona. Fanampim-panazavana mahazatra dia mety tsara, saingy mety ho sarotra izany satria ny zava-mitranga samihafa tsirairay dia mitambatra ny ekipa ekipa avy amin'ireo nosy samihafa (Oahu sy Maui) ary ireo sampana izay manana laharam-pahamehana sy fandaharana hafa.
Zava-dehibe ny mandrefy ny fanovana mandritra ny fotoana ao anaty tahiry, saingy ilaina ihany koa ny mampitovy ireo fironana ireo amin'ny lamina izay mitovitovy amin'ny vatohara miavaka ivelan'ny tahiry. Ny fanjakana Hawai'i dia manana fandaharam-potoana fanaraha-maso mandritra ny fotoana maharitra ao amin'ny faritra 8 ao Maui. Na dia tsy mitovy tanteraka aza ny fananganana fanaraha-maso ho an'ny fanaraha-maso maharitra, dia mifanaraka tsara ny fomba fampiasana. Nampiasa ny angona avy amin'ny KHFMA izahay mba handrefesana ny fanovana nandritra ny fotoana tao anaty tahirin-tsakafo ary nampiasana ireo tahiry fanaraha-maso maharitra ho an'ny fampitahana 'ivelan'ny MPA'. Na dia misy aza ny tsy fitovian-kevitra amin'izany (ohatra, ny angona tahiry ao anaty sy ivelan'ny tahirin-kevitra dia mifototra amin'ny fomba samihafa sy ny fomba fanadinana), ny tombotsoa dia tsy voatery hametraka mari-pahaizana manokana momba ny KHFMA amin'ity tetikasa ity, ka afaka nifantoka tamin'ny rehetra fanadihadihana amin'ny KHFMA fa tsy ny fizarana azy eo anelanelan'ny roa (KHFMA sy ny fifehezana iray) na faritra telo na mihoatra (KHFMA sy roa na mihoatra).
Tahaka ny amin'ny programa fanarahamaso vaovao, dia misy tombony lehibe azo avy amin'ny fahafahana mampitaha sy mizara ireo angona amin'ny programa eo an-toerana hafa. Noho izany, manolo-tena mafy ny olona hanangana fandaharanasa vaovao isika mba hananganana fomba amam-panao sy tanjona tsara indrindra ampiasaina any amin'ny faritra. Amin'ny ankapobeny, ny fampitomboana ny fizarana data amin'ny programa dia mitaky ny fahasarotana sy ny fandaniana amin'ny fanangonana angona fanadihadiana momba ny vatohara. Ao Kahekili, ny fampiasana ny tahirin-tsarimihetsika manana lanjany be dia be dia be dia be amin'ny mpahay siansa momba ny KHFMA - ireo mpikaroka maniry hianatra ny faritra dia mampiasa ny harena an-kibon'ny tany.
Farany, na dia porofo mivaingana aza no manaporofo ny fahombiazan'ny KHFMA, dia mbola lavitra ny lalana alohan'ny hitrangan'ny fihenan'ny vatohara feno. Ny fitombon'ny biomass Herbivore dia mampitombo ny fanenanam-bokatra 5 taona maro, nefa ny fanadihadiana hafa dia naneho fa ny trondro reefika dia afaka manomboka ny 10 na ny 20 taona fanakatonam-bolana mba hahatongavana any amin'ny maxima vaovao (ny aretina mpitsabo dia tena miadana tanteraka, angamba noho ny haben'ny androm-piainany). Ankoatr'izany, na dia mihamaro ny herbivory aza dia toa miteraka izay mety kokoa amin'ny fisoratana sy ny fitomboan'ny vatohara, ny fihenan-tsakafon'ny korontana mitombo dia midika fa ela (na 10-15 taona na mihoatra) alohan'ny fiantraikan'ny fiarovana ny herbivore Ny fiangonan'ny Coral dia miharihary tanteraka. Ny fandaharanasa fanadihadiana mikendry ny handrefesana ny fahombiazan'ny fitantanana ny herbivore dia tokony (i) manantena fa ny fanarenana tanteraka dia efa dingana efa ho taona tsy taona; ary (ii) mametraka tsara ny fandaharanasa fanodinana (oh: ny fitomboan'ny isan'ny mpitrandraka harena an-kibon'ny tany sy ny fiainana an-taonany) mba hanana ny lanjany lehibe indrindra amin'ny fanaraha-maso ny fiantraikany tsara. Na dia niezaka ny hanomboka fampianarana tahaka izao aza izahay ao amin'ny KHFMA, dia mbola tsy nahomby tamin'ny fametrahana vola ho an'io asa io izahay.
Fandaharan'asan'ny Fikarohana momba ny harena Coral Hawai'i
Hawai'i Division of Resources Resources, Department of Land and Natural Resources
NOAA Division Coral Reef Ecosystems, Honolulu
University of Hawai'i ao Manoa, Department of Botany
Valiny avy amin'ny Sakafo Herbivorous sy Benthos hatramin'ny 6 Fiarovana an-taonany any amin'ny faritry ny fitantanana ny jono ao Kahekili Herbivore, Maui
Fampahalalana momba ny fananganana ny Kahekili Herbivore Manam-pahaizana momba ny varimbazaha
Kahekili Herbivore Manara-maso ny fitantanana
Kahekili Herbivore Facebook